प्लास्टिक स्तन: गरिरहेको यो लायक छ?
संग सौन्दर्य - धेरै महिला कि पुरुष आदर्श विश्वास ठूलो छाती। र टिभि र इन्टरनेट र फैशन पत्रिका - सुन्दर आकार सबै शो मोडेल। यो धेरै बालिका जटिल सुरु किनभने, तिनीहरूले आफ्नै छाती को आकार संग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तिनीहरूले चाहेको बस हासिल गर्न लगभग केहि गर्न इच्छुक छन्। तर यो साँच्चै हो? त्यसैले यदि मानिसहरू थप मूल्यवान छन्, तर वास्तविक छाती? तपाईं एक प्लास्टिक स्तन आवश्यकता छ? दुई पटक विचार गर्नुपर्छ।
प्रायजसो, कारण टाउको छ। महिला आफ्नो उपस्थिति संग धेरै असन्तुष्ट हुन गर्छन, र यो मात्र स्तन आउँछ। उनले सही छ भने, यो कदर गर्छौं भनेर गरिनेछ र थप आफैलाई प्रेम सोच्छ। तर यो त्यो नयाँ कमजोरीको लागि देख र फेरि पीडित छैन भइरहेको छ। यस मामला मा, स्तन को प्लास्टिक छैन आवश्यक छ। महिला मद्दत गर्छ जसले एक आवश्यकता योग्य मनोवैज्ञानिक परिसर को छुटकारा र प्राप्त आफैलाई प्रेम र आफ्नो शरीर।
अर्को कुरा, यदि यो तपाईँको मानिस द्वारा अनुरोध गरिएको छ, वा के तपाईं पनि राम्रो बन्न आवश्यक आवश्यक ठीक कि प्लास्टिक स्तन निर्णय गरेका छौं। आफ्नो डाक्टर कुरा, आवश्यक प्रत्यारोपण टिप्न, सबै वित्तीय र अन्य मुद्दाहरू छलफल, सञ्चालन हुनेछ जहाँ कि क्लिनिक बारेमा समीक्षा पढ्नुहोस्। समय आउँछ अघि सबै विवरण जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्। अझै पनि, यो सर्जरी - प्लास्टिक स्तन। मास्को तपाईं स्तन वृद्धि गर्न सक्छन् जहाँ क्लीनिक को एक ठूलो संख्या लागि प्रसिद्ध छ। तिनीहरूलाई देखि सबै भन्दा राम्रो तपाईं सुहाउने एक चयन गर्नुहोस्।
आफ्नो डाक्टर संग, तपाईं व्यक्तिगत रूपमा सबै छलफल गर्न सक्षम हुनेछ। प्लास्टिक स्तन निम्न सङ्केत गर्छ लागि गरिन्छ:
Gipermastiya। यो एक सामान्य जीवन बिताउन एक महिला रोक्न जो धेरै ठूलो छाती, छ, यसलाई लुगा, आफ्नो पछाडि एक भारी लोड छनोट गर्न गाह्रो छ। यस्तो अवस्थामा, तपाईं को लागि सर्जरी गर्न Resort सक्नुहुन्छ स्तन कमी।
Gipomastiya। एक केटी लगभग कुनै छाती छ, वा यसलाई आकार मा सानो हुँदा, डाक्टर स्तन वृद्धि सर्जरी बनाउन सक्छ।
Ptosis। त्यसैले भनिन्छ छाती sagging र यसको आकार गुमाउने। यो सञ्चालन गरेर सही गर्न सकिन्छ।
को छाती को विषमता। विभिन्न आकार को छाती भने, यो पनि सर्जरी गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अघिल्लो सञ्चालन देखि कमी सुधार।
Gipomastiya र ptosis।
Gipermastiya र ptosis।
त्यसैले, यो निर्णय भएको थियो! तपाईं भनिन्छ सञ्चालन पाउनुहुनेछ "प्लास्टिक स्तन।" लागत डाक्टर संग व्यक्तिगत रूपमा तय गरिएको छ। तर सामान्यतया यस कार्यका 95,000 225,000 गर्न rubles टाढा छैन स्थित छ।
पहिलो चीरा। त्यसपछि को मद्दत एक खल्ती गठन , को pectoralis प्रमुख मांसपेशी त्यसपछि प्रत्यारोपण इंजेक्शन सबै आवश्यक टाँका लागू गरियो। brisket कट गर्न सबै भन्दा राम्रो कुरा हो, यसलाई महिलाहरु को लागि सुरक्षित छ र डाक्टर लागि सुविधाजनक छ। सर्जन पेशेवर छ भने, यो inframammary गुना संग एकै समयमा पर्नु हुनेछ जो एक कट बनाउन सक्छ। यो एक जौहरी काम आवश्यक छ, यस मामला मा, कट सजिलै देखिने छैन। यो प्रत्यारोपण र यसको आकार सर्जरी अघि रोगी चयन गरिएको छ।
तपाईं प्लास्टिक स्तन गर्न चाहे निर्णय।
Labiaplasty: अघि र पछि। समीक्षा, मूल्य
एकाटेरिनबर्ग, मह। कलेज: वर्णन, विशेषता, विशेष गरी आय र समीक्षा
कफी स्वास्थ्य को लागि राम्रो छ भन्ने थाहा छ? र किन छ!
Multivarka मा फ्रेंच मासु: सरल र स्वादिष्ट
अब्खाजिया कार द्वारा एक यात्रा
ग्राहकहरु कसरी पाउन: सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका
"आधार" (आत्म-leveling तल्ला): विशेषताहरु, फ्लो, समीक्षा
"जीवन" को अवधारणा: पर्याय, अर्थ र व्याख्या
कसरी इन्टरनेट र फोन कलहरू "Tele2" मा NL जडान गर्न?
ACMR के छ (स्वायत्त संवेदी मेरिडिकल प्रतिक्रिया) - परिभाषा, घटना र रोचक तथ्यहरूको विवरण
ब्वाँसो फेंग (amulet): मान फोटो